Global Voices teny Malagasy » Fahatsiarovana Ireo Nanjavona Tao Orogoay Jerena Avy Amin’ny Mason’ny Mpakasary · Global Voices teny Malagasy » Print
Fahatsiarovana Ireo Nanjavona Tao Orogoay Jerena Avy Amin'ny Mason'ny Mpakasary
Voadika ny 05 Janoary 2016 7:16 GMT 1	 · Mpanoratra Fernanda Canofre Nandika avylavitra
Sokajy: Orogoay, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Iray amin'ireo sarin'i Miradas Ausentes ao Montevideo | Photo: Juan Urruzola/famerenana mamoaka nahazoana alàlana
Taorian'ny 12 taona niainana an-tsesitany, rehefa niverina tao Orogoay i Juan Urruzola, niverina tamin'ny fombany nivenjivenjy nanerana ireo arabe'i Montevideo nahazatra azy fahiny izy. Ny lanitra, ireo fitsangatsanganan'ny mpandeha an-tongotra fantatra hoe la rambla,  ny renirano, ny ranomasina, ny volondavenona — nijanona ho tsara mahafinaritra ho toy izay nahatsiarovany azy ny zavatra rehetra. Afa-tsy ireo endrika maro nahazatra azy ny nahita azy isanandro nefa avy eo tsy eo intsony.
1987 tamin'izay. Tsy teo amin'ny fitondrana intsony ny mpitondra jadona nandroaka azy hiaina an-tsesitany tany Espaina — taorian'ny roa taona nidirany am-ponja. Saingy tsy mbola sitrana ireo ratra naterany.
Toy ny zavatra nitranga tao Arzantina sy Brezila mpifanolo-bodirindrina aminy, hatramin'i Shily tsy lavitra eo, niaina fanonganam-panjakana niarahan'ny sivily sy miaramila nanao i Orogoay tamin'ny 1973, izay nandetika ny firenena ho ao anaty jadona miaramila nandritry ny 12 taona taorian'izany . Ny famoretana — napetraka niaraka tamin'ny fanohanan'ireo hafa mpanao jadona tao Amerika Latina — dia nahitàna ireo fomba fampijaliana, famonoana sy fampanjavonana. Vokany, mbola misy ao Orogoay olona 192 nanjavona nandritra ilay fitondràna jadona  no mbola tsy maintsy karohana.
Ho an'i Urruzola, ny ratsy indrindra dia toa olona vitsy monja no mba miraharaha ny momba ny fahatsiarovana ireo rehetra ireo. Araka izay nozarainy ho an'ny Global Voices tao anaty tafa iray natao tamin'ny alàlan'ny mailaka:
Hatramin'ny niverenako tanteraka, dia mbola nosedrain'ny tenako indray ny tsimatimanota sy ny tsy fahampian'ny fahatsiarovana izay azontsika hita ao anatin'ny fiarahamonintsika. Ampahany iray lehibe amin'ny fiarahamonina no miady ny hahafantatra misimisy kokoa ary hahita valiny amin'izay nitranga teo anelanelan'ny 1972 sy 1985. Ny ampahany hafa miezaka mafy ny hanakona azy io sy hanafaka ireo mpamoritra tsy hiatrika fitsaràna. Izany rehetra izany no mahatonga ahy, mazava loatra, hitondra ilay lohahevitry ny fahatsiarovana ho ampahany amin'ny asako.
Tamin'ny alalàn'ny saripika, asa nianarany tany an-tsesitany, no nahitàn'i Urruzola fomba iray hamenoana ny banga. Natombony tamin'ny Montevideo 12 , angon-tahiry iray mampiseho ny fomba nihaonany indray tamin'ny tanàna nahaterahany. Saingy nandaniany efa ho ampolo taona ny nanangona ireo sary mandrafitra ny asa tena ahafantarana azy indrindra: Miradas Ausentes  (Fijerin'ny Tsy Eo), angon-tsary izay ahitàna an'i Urruzola mitàna ny saripikan'ireo olona nanjavona nandritry ny fitondràna jadona saingy atsofoka kosa hifanohitra amin'ny tontolon'ny renivohitra.
‘Zavatra tena mety ho ilaina ho an'ny sasany ny fahatsiarovana’
Araka ny ambaran'ilay mpakasary, tena kisendrasendra ihany ny mason-tsivana anangonana ny endrika ao anatin'ireo andiany ireo. Naharay fehezana misy sary marobe izy avy amin'ny Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos  (Fikambanan'ny Fianakavian'ireo Olona Voatàna ary Nanjavona) mba ho ampiasaina ao amin'ilay fahatsiarovana ho fanomezana voninahitra ireo izay nitolona nanohitra ny jadona. Taty aoriana kely, hitan'i Urruzola fa azony atao ny manao misimisy kokoa miainga amin'ireo sarikely :
Te-hivoaka ny trano aho miaraka amin'ireo sary ataoko am-paosy, avy eo atsy amin'ny tànana ilany mitàna izany sy mametraka azy manoloana ny fakantsary rehefa mahafinaritra ahy ny tontolo manodidina, ary dia manapika ilay sary. Indraindray, raha vao maizina na mazava ny tontolo atao lafika, nezahako ny nampiasa sary iray hafa matromatroka na mazavazava kokoa. [Ny hevitra] ho azy ireny dia ny hampivoitra ny fisiany mifanohitra amin'ny tanàn-dehibe natao lafika.
Lazain'i Urruzola fa tsy fantany na kisendrasendra, na dia efa izay tokoa, fa hoe ilay lehilahy miavaka ao anatin'ny tahiriny — ilay iray matetika naseho tamin'ireo fampirantiana nataony — no sarikely iray an'ilay olona nanjavona voalohany ‘hita’ tao Orogoay. Fernando Miranda ilay lehilahy teo amin'ny sary, izay hitan'ireo  “anthropologists” avy amin'ny Universidad de la República tamin'ny Martsa 2006 ny sisan-taolany, tao amin'ny toby iray an'ny tafika fahiny. Vadintany i Miranda, nampianatra momba ny lalàna sivily tao amin'ny anjerimanontolo ary solontenan'ny Antoko Kaominista sy FIDEL (Mandatehezam-Panafaham-Pirenena avy amin'ny Havia). 56 taona izy tamin'izay ary nanambady sy niteraka roa, fony izy nalaina tao an-tranony ny taona 1975.
Fernando Miranda, ilay voalohany niharan'ny fanjavonana an-terisetra nandritry ny fitondràna jadona tao Orogoay, hita taona marobe taty aoriana. | Sary: Juan Urruzola/Famerenana mamoaka nahazoana alàlana.
Taty aoriana i Miradas Ausentes dia navadika aloha ho saribe iray fanentanana tao Porto Alegre , nandritry ny isan-dRoataonan'ny Taokanto ao Mercosul . Hetsika tahàka izany ihany no natao tao Montevideo , saingy nahazoana vokatra tena hafa tanteraka mihitsy :
Nisy karazana fanehoankevitra samihafa avy amin'ny olona. Avy amin'ireo voadona ny fihetsehampony ka hatramin'ireo nandrovitra [ny sary]. Zavatra tena mety ho ilaina ho an'ny sasany ny fahatsiarovana, saingy zavatra mila lavina koa ho an'ny hafa. io no mahatonga ny taokanto ‘politika’, na ny hetsipanoherana mampiasa ny taokanto, ho mahaliana: Ampidirin-dry zareo ho ao anatin'ny tontolo an-eritreritra ireo kasinga sy lohahevitry ny adihevitra.
‘Fialàna aina tsy misy fitsaharany ny fitadiavana havan-tiana nanjavona’
Tany amin'ny faha-15 taonany  i Urruzola no voasambotra voalohany noho ny “fitondrantena tsy ara-tsosialy”. Tamin'ny 1971 ny faharoa, nampangaina ho “sady mpianatra no mpomba ny hery ankavia”. Maro tamin'ireo nàmany no niatrika fiampangàna mitovy amin'izany. Ny sasany nandeha tany an-tsesitany, raha ny hafa koa nanjavona tany anatin'ireo toby miaramila. Ho azy ireny no nanokanan'i Urruzola ny asan'ny fiainany. Ho fanehoam-pitiavana ny fahatsarovana ho an'ireo izay tsy hohadinoiny mandrakizay, ary hanampy ny fireneny hanao tahàka izay koa.
ny asan'i Juan Urruzola ao amin'ny araben'i Montevideo. Sary navoaka miaraka amin'ny fahazoandàlana.
Nanampy tamin'ny fitondrana ny asany ho tonga amin'ny olona midadasika kokoa ny aterineto. Betsaka amin'ny tantaran'i Urruzola no afaka jerena ao anatin'ity lahatsary amin'ny teny Espaniola ity, nozarain'i Sebastian Alonso ao amin'ny Vimeo .
Ao anatin'ilay tafa, miresaka momba ny fahatsiarovana sy fanonerana ilay mpanakanto, saingy, ambonin'ny zavatra rehetra, ambarany ny maha-zava-dehibe ny fitahirizana ho velona ny fahatsiarovana manantantara:
Zavatra mampivarahontsana ny fanjavonana an-terisetra, aty Amerika Latina dia manana olona an'aliny nanjavona isika, indrindra fa tamin'ireo vondrom-piarahamonina indizena, ireo firenena toa an'i Goatemalà, El Salvador, Kolombia, nampiasain-dry zareo mafy tokoa izy io, ary dia nanao tahàka izany koa ireo firenena mpifanolo-bodirindrina Shily, Arzantina, Brezila, Bolivia. Fa izany eo ihany, trosa iray ny fitazonana tsy miampanga io olana io. Fialàna aina tsy misy fitsaharany ny fitadiavana havan-tiana nanjavona. Miraikitra anao mandrakizay izany
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/05/77357/
 la rambla,: https://en.wikipedia.org/wiki/Rambla_of_Montevideo
 jadona miaramila nandritry ny 12 taona taorian'izany: https://en.wikipedia.org/wiki/Civic-military_dictatorship_of_Uruguay
 olona 192 nanjavona nandritra ilay fitondràna jadona: http://www.elpais.com.uy/informacion/secretaria-ddhh-cifra-desaparecidos-dictadura.html
 Montevideo 12: http://www.urruzola.net/obra/montevideo-12-anos-despues-1985/
 Miradas Ausentes: http://www.urruzola.net/obra/miradas-ausentes/
 Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos: http://organización Familiares de Detenidos Desaparecidos
 Porto Alegre: http://www.urruzola.net/blog/2014/05/07/memoria-en-porto-alegre/
 isan-dRoataonan'ny Taokanto ao Mercosul: http://www.fundacaobienal.art.br/site/en
 natao tao Montevideo: http://www.urruzola.net/obra/miradas-ausentes-en-la-calle/
 Tany amin'ny faha-15 taonany: https://vimeo.com/32629333